Xayeysiinta Xagaaga - Machadka Waxbarashada Labada Luuqadood
Bogga ugu weyn Soo bandhigid Khaas ahXayeysiinta Xagaaga
Xagaaga kulul Prom Xayeysiinta kulul !!!
Xayaysiisyada xagaaga ayaa lagu kordhiyay BEI! Ha seegin fursaddaada Start safarkaaga waxbarasho Hadda!
Fasallada internetka ama On-campus.
Xerada yar iyo kuwa nabdoon
39 sano oo heer sare ah !!!
* Bixinta Gaarka ah - Shuruudo iyo shuruudo kala duwan ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo